ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး နာရီ (၅) လုံး (ဒုတိယပိုင်း)
23 Mar 2018 . 5:47 PM
စမတ်ဖုန်းတိုင်းမှာ နာရီပါလာပေမယ့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက နာရီကို အဆင့်အတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပတ်နေကြဆဲပါ။ ဘယ်လိုပဲနည်းပညာတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာပါစေ နာရီဝါသနာအိုးတွေက မြတ်မြတ်နိုးနိုး ဝတ်ဆင်ဆဲပါပဲ။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံးနာရီ (၅) လုံးကို အပုိုင်း (၂) အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) Patek Philippe Henry Graves Supercomplication
နာရီရဲ့နာမည်ကိုက ရှည်လွန်းတာ တစ်မျိုးမထင်နဲ့ဗျ။ ၁၉၃၃ခုနှစ်မှာ ‘Patek Philippe’ ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီက ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ကြီး ‘Henry Graves Jr’ အတွက် အထူးထုတ်ပေးတဲ့အိတ်ဆောင်နာရီဖြစ်ပါတယ်။ သူကလည်း ကားထုတ်လုပ်ရေးပိုင်ရှင်ကြီး ‘James Ward Packard’ ကို ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်လုပ်ချင်လို့ သီးသန့်မှာလိုက်တာပါ။ သူ ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာ လေလံတင်ရောင်းချတော့ အိတ်ဆောင်နာရီရဲ့ဈေးနှုန်း ဒေါ်လာ ၂၄သန်းဗျ။
(၄) Chopard 201-Carat Watch
‘Chopard’ ဆိုတာက လက်ဝတ်ရတနာနဲ့ နာရီတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးဗျ။ ဆိုတော့ ဒီနာရီမှာ စိန် (၂ဝ၁) ကာရက်ကို ထည်သွင်းထာလို့ ‘Chopard 201-Carat Watch’ လို့ နာမည်ပေးထားတာပါ။ ပန်းရောင်စိန် (၁၅) ကာရက်၊ အပြာရောင်စိန် (၁၂) ကာရက်၊ အဖြူရောင်စိန် (၁၁) ကာရက်နဲ့ ဖြူဝါရောင် (၁၆၃) ကာရက်တို့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက် ၂၅ သန်းအထိ ဈေးမြင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Chopard 201-Carat Watch
(၃) Breguet Marie-Antoinette Grande Complication
ဒီနာရီဟာ ပြင်သစ်ဘုရင်မကြီး ‘Marie Antoinette’ အတွက် ‘Abraham-Louis Breguet’ က ၁၇၈၂ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အိပ်ဆောင်နာရီလေးပါ။ အိပ်ဆောင်နာရီဆိုပေမယ့် နာရီပြုလုပ်ချိန်ဟာ နှစ်ပေါင်း (၄ဝ) ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး မပြီးသေးခင်မှာ ဘုရင်မကြီး နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။ ‘Abraham-Louis Breguet’ ဟာ ၁၈၂၃ခုနှစ်မှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး သူ့သားက ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၁၈၂၄ခုနှစ်မှာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ နာရီရဲ့ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝ ပါ။
Breguet Marie-Antoinette Grande Complication
(၂) Graff Diamonds The Fascination
‘Graff Diamonds The Fascination’ နာရီကို ၁၅၂.၉၆ ကာရက်ရှိတဲ့ စိန်ဖြူတွေ ဝန်းရံထားပြီး အလယ်မှာတော့ ၃၈.၁၃ ကာရက်ရှိတဲ့ သစ်တော်သီးပုံစံစိန်ပွင့်တွေ ထည့်ထားပါတယ်။ နာရီဟာ အလွန်သေးငယ်ပြီး လက်စွပ်ပုံစံ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက ဒေါ်လာ သန်း ၄ဝ ပါ။
(၁) Graff Diamonds Hallucination
ဒီနာရီကိုတော့ လန်ဒန်အခြေစိုက် ‘Graff Diamonds’ ရတနာကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်လိုက်တာပါ။ ၁၁ဝ ကာရက်ရှိတဲ့ အရောင်အသွေးမျိုးစုံ စိန်ပွင့်တွေကို ပလက်တီနမ်ကွင်းပေါ်မှာ ဆင်ထားတဲ့ နာရီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ဈေးအကြီးဆုံးနာရီလို့ ဆိုနိုင်ပြီး ဒေါ်လာ ၅၅ သန်းတန်ပါတယ်။
ကဲ . . . . လက်ဝတ်တန်ဆာဆိုတာ ‘ရှိရင် တန်ဆာ၊ မရှိရင် ဝမ်းစာ’ ပါပဲ။ နာရီရဲ့အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ အချိန်မှန်ဖို့ပါ။ သန်းကျော်တန်နာရီတွေကို ဝတ်ထားပြီး အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ မသုံးဘူးဆိုရင် အလကားပါပဲ။ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်တဲ့ လူတော်လူကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။
ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံး နာရီ (၅) လုံး (ဒုတိယပိုငျး)
စမတျဖုနျးတိုငျးမှာ နာရီပါလာပမေယျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှကေ နာရီကို အဆငျ့အတနျးတဈခုအနနေဲ့ ပတျနကွေဆဲပါ။ ဘယျလိုပဲနညျးပညာတှေ ဖှံ့ဖွိုးလာပါစေ နာရီဝါသနာအိုးတှကေ မွတျမွတျနိုးနိုး ဝတျဆငျဆဲပါပဲ။ ကမ်ဘာ့ဈေးအကွီးဆုံးနာရီ (၅) လုံးကို အပိုငျး (၂) အနနေဲ့ ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
နာရီရဲ့နာမညျကိုက ရှညျလှနျးတာ တဈမြိုးမထငျနဲ့ဗြ။ ၁၉၃၃ခုနှဈမှာ ‘Patek Philippe’ ဆိုတဲ့ကုမ်ပဏီက ဘဏျလုပျငနျးရှငျကွီး ‘Henry Graves Jr’ အတှကျ အထူးထုတျပေးတဲ့အိတျဆောငျနာရီဖွဈပါတယျ။ သူကလညျး ကားထုတျလုပျရေးပိုငျရှငျကွီး ‘James Ward Packard’ ကို ဂုဏျတုဂုဏျပွိုငျလုပျခငျြလို့ သီးသနျ့မှာလိုကျတာပါ။ သူ ကှယျလှနျတဲ့အခြိနျမှာ လလေံတငျရောငျးခတြော့ အိတျဆောငျနာရီရဲ့ဈေးနှုနျး ဒျေါလာ ၂၄သနျးဗြ။
‘Chopard’ ဆိုတာက လကျဝတျရတနာနဲ့ နာရီတှကေို ထုတျလုပျတဲ့ ကုမ်ပဏီကွီးဗြ။ ဆိုတော့ ဒီနာရီမှာ စိနျ (၂ဝ၁) ကာရကျကို ထညျသှငျးထာလို့ ‘Chopard 201-Carat Watch’ လို့ နာမညျပေးထားတာပါ။ ပနျးရောငျစိနျ (၁၅) ကာရကျ၊ အပွာရောငျစိနျ (၁၂) ကာရကျ၊ အဖွူရောငျစိနျ (၁၁) ကာရကျနဲ့ ဖွူဝါရောငျ (၁၆၃) ကာရကျတို့ ပေါငျးစပျထားတဲ့အတှကျ ၂၅ သနျးအထိ ဈေးမွငျ့သှားတာဖွဈပါတယျ။
ဒီနာရီဟာ ပွငျသဈဘုရငျမကွီး ‘Marie Antoinette’ အတှကျ ‘Abraham-Louis Breguet’ က ၁၇၈၂ခုနှဈမှာ ပွုလုပျပေးတဲ့ အိပျဆောငျနာရီလေးပါ။ အိပျဆောငျနာရီဆိုပမေယျ့ နာရီပွုလုပျခြိနျဟာ နှဈပေါငျး (၄ဝ) ကွာမွငျ့ခဲ့ပွီး မပွီးသေးခငျမှာ ဘုရငျမကွီး နတျရှာစံခဲ့ပါတယျ။ ‘Abraham-Louis Breguet’ ဟာ ၁၈၂၃ခုနှဈမှာပဲ ကှယျလှနျခဲ့ပွီး သူ့သားက ဆကျလကျပွုလုပျခဲ့ရာ ၁၈၂၄ခုနှဈမှာ ပွီးဆုံးခဲ့ပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ နာရီရဲ့ဈေးနှုနျးက ဒျေါလာ သနျး ၃ဝ ပါ။
‘Graff Diamonds The Fascination’ နာရီကို ၁၅၂.၉၆ ကာရကျရှိတဲ့ စိနျဖွူတှေ ဝနျးရံထားပွီး အလယျမှာတော့ ၃၈.၁၃ ကာရကျရှိတဲ့ သဈတျောသီးပုံစံစိနျပှငျ့တှေ ထညျ့ထားပါတယျ။ နာရီဟာ အလှနျသေးငယျပွီး လကျစှပျပုံစံ ထုတျလုပျထားပါတယျ။ ဈေးနှုနျးက ဒျေါလာ သနျး ၄ဝ ပါ။
ဒီနာရီကိုတော့ လနျဒနျအခွစေိုကျ ‘Graff Diamonds’ ရတနာကုမ်ပဏီက ထုတျလုပျလိုကျတာပါ။ ၁၁ဝ ကာရကျရှိတဲ့ အရောငျအသှေးမြိုးစုံ စိနျပှငျ့တှကေို ပလကျတီနမျကှငျးပျေါမှာ ဆငျထားတဲ့ နာရီပဲဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာ ဈေးအကွီးဆုံးနာရီလို့ ဆိုနိုငျပွီး ဒျေါလာ ၅၅ သနျးတနျပါတယျ။
ကဲ . . . . လကျဝတျတနျဆာဆိုတာ ‘ရှိရငျ တနျဆာ၊ မရှိရငျ ဝမျးစာ’ ပါပဲ။ နာရီရဲ့အဓိက လုပျဆောငျခကျြဟာ အခြိနျမှနျဖို့ပါ။ သနျးကြျောတနျနာရီတှကေို ဝတျထားပွီး အခြိနျကို အကြိုးရှိရှိ မသုံးဘူးဆိုရငျ အလကားပါပဲ။ အခြိနျကို အကြိုးရှိရှိအသုံးခနြိုငျတဲ့ လူတျောလူကောငျးတှေ ဖွဈနိုငျကွပါစေ။
by Naw Hsel Hte . 1 month ago